गैंडा मृत अवस्थामा फेला पर्‍यो- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
गैंडा मृत अवस्थामा फेला पर्‍यो
पुस ७, २०७४ कमल पन्थी
गुलरिया — बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जस्थित खाता जैविकमार्गमा करिब ३८ वर्षीय गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको छ । रेडियो कलर जडान भएको उक्त गैंडा मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत पर्सेनी घाट नजिक डाडागाउँको जंगलमा मृत अवस्थामा बिहीबार फेला परेको जानकारी शु्क्रबार निकुन्ज प्रशासनले जानकारी गराएको छ ।
कालगतिमा गैंडाको मृत्यु भएको निमित्त संरक्षण अधिकृत अशोक कुमार भण्डारीले भने,‘मृत भएको गैडाको खाग,खुर लगायतका संवेदनशिल अंग निकालेर गाडिएको छ ।’
उमेरले बुढो हुँदै गएको गैंडा विरामीका कारण मरेको अनुसन्धानमा देखिएको निकुन्ज प्रशासनको भनाई छ । उक्त घटना सदरमुकाम गुलरियादेखि करिब ३० किमी पश्चिममा भएको हो । बर्दिया निकुन्जमा ३७ वटा गैंडा छन् । ती मध्ये कर्णाली तटिय क्षेत्र आसपासमा २९ र बबई उपत्याकामा ८ वटा गैंडा रहेको निकुन्जले जनाएको छ ।
प्रकाशित : पुस ७, २०७४ १७:०२
हामी किन यतिधेरै पाखण्डी?
पुस ७, २०७४ नवीन रायमाझी
काठमाडौँ — अन्याय गर्ने त अपराधी हुँदै हो । तर सहनेपनि दोषी हो भनेर हामीलाई सानैदेखि स्कुल वा घरमा सिकाइएको थियो । जव त्यस्तै अन्यायको प्रतिकार गर्ने समय आउँछ त्यो बेला कि त आफु भन्दा ठुलो को जवाफ फर्काउनु हुँदैन भनेर रोकिन्छ कि त उसले जे भन्यो वा गर्यो भने पनि आफुले भने केहि गर्नु हुँदैन भनिन्छ । मेरो बिचारमा केटाकेटीलाई जे सिकायो त्यो नै सिक्ने हो, जव मौकामा चुप लाग्नु पर्छ भने त्यो आदर्शका ठुला ठुला कुरा किन सिकाउने ?
यहाँ मेरो जीवनका तीन प्रसंग उप्काउन चाहन्छु, जहाँ मैले आफुलाई मन नपरेको कुरामा प्रतिकार गर्दा छुच्चो वा असभ्यमा दरिन पुगियो । यद्यपी मलाई कसैको "क्यारेक्टर सर्टिफिकेट" को जरुरत छैन र अरुको बारेमा कुरा गर्दा सबैले पहिले आफु कुन धरातलमा उभिएको छु भनेर सोच्दा उचित हुन्छ ।
प्रसंग एक : मेरो मामाघरतर्फ आमाहरु आठ जना दिदीबहिनी र चार जना दाजु भाइ थिए । अब त्यत्रो सन्तानमा धनी/गरीब, राम्रो/नराम्रो, योग्यता भएका/नभएका विभिन्न तह र तप्काका मान्छेहरु हुनु स्वाभाविकै हो । आफ्नो योग्यता र क्षमताले ठुलो वा सानो काम जे गरेपनि नाताको हिसाबले एउटै दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । दुर्भाग्यबश मेरो मावलीहरुको आर्थिक/सामाजिक रुपमा सम्पन्न र आफ्नो मतलब पर्नेहरु सँग गर्ने ब्यबहार र बिपन्न र आफ्नो खासै काम नपर्नेहरुसँग गर्ने ब्यबहारमा आकाश पातालको फरक थियो । एक दिनको कुरा हो मेरै उमेरको मेरो एउटा सानीआमाको छोरा र म मामाघरमा थियौं, त्यहाँ एउटा अर्को अतिथिले हामीलाई देखाएर यी बाबुहरू को हुन् भनेर सोध्यो, त्यसको जवाफमा मेरो मामाले मेरी सानीआमाको छोरालाई देखाएर यो मेरो भानिज र मलाई देखाएर यो फलानो (मेरी आमाको नाम लिएर) को छोरा भनेर परिचय दिए । दुबैलाई मेरो भानिज भनेको भएपनि हुनेमा मलाई आफुसँग जोड्न नचाहेको सुन्दा अलिकति नरमाइलो लाग्यो । त्यसपछि मैले मामा र मामाघरसँगको सम्बन्ध एकतर्फी रुपमा बिच्छेद गरिदिएँ । हाल मेरो र उनीहरुको बीचमा कुनै खास सम्बन्ध छैन र मलाई आफ्नो भानिज भनेर परिचयसम्म दिन नसक्ने वा नचाहने मामा हुनु र नहुनुको कुनै खास तात्पर्य छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । अहिले पनि मेरो बारेमा मनचिन्ते व्यंग्य गरेर मनोरंजन गर्नु र कस्तो ठुलो भएको हामीलाई वास्ता गर्दैन भन्नु उनीहरुको दिनचर्या नै हो । तर मलाई मेरो मामा र मामाघरसँग कुनै लगाव छैन र मेरो आमाको पनि धेरै पहिले मृत्यु भएको कारणले पनि सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु कुनै जरुरी रहेन ।
प्रसंग दुई : मेरो एक आफन्तलाई मेरो पाँच फुट चार इन्चको उचाइ प्रति निकै ठुलो गुनासो छ । जहिले पनि उनी मलाई तँ किन यति होचो भएको भनेर प्रश्न गरिरहन्थे । अब मलाई मेरो यति नै किन उचाइ भयो भन्ने कुनै ज्ञान छैन र सम्भवत करिब तीन करोड नेपालीहरु मध्ये आधा भन्दा बढि म र मेरो जतिकै उचाई भएकाहरु छन् होला । मन नपरेकाहरुले पुड्के भनेर आफ्नो तुष पोख्ने र मन पराउने हरुले "नेपाली हाइट" भनेर सान्त्वना दिने गरेपनि बास्तबिकता के हो भने मैले म मेरो उचाई बढाउन सक्दिन । कुनैपनि सभ्य समाजमा कसैको उचाइ, मोटाइ, रंग जस्ता आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेका प्रसंगहरु निकालेर कसैको हाँसी उडाउनु राम्रो मानिंदैन, झन् अमेरिकामा त यो गैरकानुनी नै हो । स्वयंको सन्तान अपाङ्ग भएको मेरा ति आफन्तको कुरा कति सुनिरहनु भनेर मैले तपाईंको त बच्चा अपाङ्ग छन् कमसेकम म त होचो भएपनि सामान्य त छु भनेर जवाफ दिएँ, त्यो दिनदेखि रुष्ट भएका ति कथित आफन्त मलाई हुनु न खानु ठुलो भएको भनेर घृणा गर्छन् र म उनको घृणा मा "इन्ज्वई" गर्छु ।
प्रसंग तीन: मेरो अर्को आफन्तलाई मेरो रुपप्रति घृणा छ । यो संसारमा कस्तो रुपलाई राम्रो भन्ने र कस्तोलाई नराम्रो भन्ने छुट्टै बहसको बिषय होला तरपनि कसैले कसैलाई तँ राम्रो वा नराम्रो भनेर सुन्दरताको प्रमाणपत्र दिने औकात राख्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ । पंक्तिकार आफुलाई मनमोहक रुपको मालिक छु भन्ने दाबि त गर्दैन तर हेर्दैमा घिन लाग्ने रुपरङ्ग छ जस्तो पनि लाग्दैन । यदि हेर्दैमा दशा लाग्ने जस्तो रुपरङ्ग छ र कसैलाई मेरो अनुहारको कारण कुनै पनि किसिमको असुविधा भएको छ भने ह्रदयदेखि नै दुख प्रकट गर्दछु । स्वयं आफ्नो छोरा कुरुप भएको नदेख्ने र अरुलाई राम्रो वा नराम्रो भन्नु सभ्यता होइन जस्तो लाग्छ । एकदिन कति सहनु भनेर मैले तिम्रो ओंठ काटिएको छोरा भन्दा त मै राम्रो छु भनिदिएँ । मैले त्यस्तो जवाफ दिएपछि उनी के भन्छन भने मेरो छोरा मेरो लागि राम्रो छ । यदी त्यस्तै हो भने मेरो बाबुआमाका लागि पनि त म राम्रो छु, त्यस्तो कुरा गर्दा उनीसँग जवाफ हुँदैन र चुप लाग्छन् । तर मेरो पछाडी उनी मलाई आफु भन्दा ठुलोसँग मुखमुखै लाग्ने असभ्य र बदमासको उपमा दिन्छन् ।
यी माथी उल्लेखित प्रस‌ंगहरु मैले पुरा इमान्दारिता पूर्वक लेखेको हुँ र यसमा कुनै बनाबटीपना छैन । यद्यपी म आफुलाई कुनै दुधले पखालिएको मान्छे भएको दाबि गर्दिन । यि प्रसंगहरुमा मेरो कहाँनिर के गल्ती छ? यदी अन्याय भएको पनि सहेर बस्नु पर्ने हो भने अन्याय सहनु हुँदैन भनेर किन सिकाउनु? बाहिर एउटा कुरा र भित्र अर्कै कुरा गर्ने हामी पाखण्डी नै हौं त?
प्रकाशित : पुस ७, २०७४ १६:५८